सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड भोलि, कति बजे ? – BikashNews
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड भोलि, कति बजे ?
२०७७ असोज २९ गते १९:११ विकासन्युज
काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले निष्काशन गरेको साधारण सेयर (आईपीओ) भोलि शुक्रबार (असोज ३० गते) बाँडफाँड हुने भएको छ । आईपीओ भोलि बिहान साढे ८ बजे बाँडफाँड हुने सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटलले जानकारी गराएको छ ।
क्यापिटलका अनुसार कम्पनीले निष्काशन गरेको आईपीओमा ८२ हजार ७ सय ३ जनाले एक करोड ८९ लाख ७५ हजार ६० कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिएका थिए । जुन कम्पनीले माग गरेको भन्दा ६.९५ गुणा बढी हो ।
कम्पनीले (असोज २१ गते) देखि प्रतिसेयर अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ दरको ३० लाख कित्ता अर्थात ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ बिक्रीमा राखेको हो ।